जाडोमा कस्तो लुगा रुचाउँछन् नायक दीपकराज गिरी ? « Postpati – News For All
जाडोमा कस्तो लुगा रुचाउँछन् नायक दीपकराज गिरी ?
मंसिर ८, काठमाडौँ । चिसो बढ्दै गएको काठमाडौंमा दिन छिप्पिएर साँझ नपर्दै चिसोले सताउँछ । शरीरले न्यायो कपडाको माग गर्न थालिसकेको हुन्छ ।
जाडो मौसममा लगाइने लुगाका विभिन्न ब्रान्डमा तन्नेरीको आँखामा पर्न थालेका छन् । अहिले युवतीका निम्ति कोरियन डिजाइनका फिटिङ लेदर ज्याकेट, लङ उनी स्वेटर तथा बुट बढी लोकप्रिय छन् । नायिका पूजा शर्मालाई जाडो महिना नै मन पर्छ ।
‘अंग प्रदर्शन गर्ने मात्र फेसन होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘म पनि फेसनमा त्यत्तिकै चासो राख्छु तर छोटा छोटा पहिरनले मात्र आफू ‘फेसनेबल’ हुन्छु भन्ने मान्दिनँ ।’
जाडो महिनामा छाला, अनुहार सुरक्षित हुनुको साथै नयाँ नयाँ लुगाको मजा पनि लिन सकिन्छ । बुटको साथमा लङकोट लगाउनेमा आफूलाई खुब स्मार्ट लाग्ने शर्मा यो जाडोमा पनि अर्को बुट, लङ्कोट र हाफकोट किन्ने विचारमा छिन् । उनले टोपी र स्काफलाई मिलाएर लगाउन मनपर्ने बताइन् ।
निर्देशक तथा नायक दीपकराज गिरी भन्छन्, ‘मलाई प्रायः गर्मी महिना मन पर्छ तर फेसनको हिसाबले जाडो महिना पनि उत्तिकै मन पर्छ । प्रायः जाडोमा कोट नै मन पर्छ, कहिलेकाहीँ लेदरको ज्याकेट लगाउन पनि रुचाउँछु ।’
ज्याकेट किन्दा आफूले लगाउने अन्य लुगा र सामग्रीहरूसँग मिलाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजमा तेस्रो सेमेस्टर अध्ययनरत रोशन कार्की भने हाइनेक वा फुल टिसर्टसँग ज्याकेट लगाउन रुचाउँछन् । सुन्धारास्थित सिभिल मलमा भेटिएका कार्की भन्दै थिए, ‘नयाँ ज्याकेट किन्दै छु ।’ यात्राका लागि बाइक हाँक्न उनको रोजाइमा धेरैजसो विन्डप्रूफ ज्याकेट पर्छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
विगत २२ वर्षयता काठमाडौंमा रेडिमेड लुगाहरूको व्यापार गर्दै आएका सरोज तुलाधर बढ्दो इन्टरनेटको प्रयोग र विदेश जाने आउने क्रमसँग युवापुस्ता फेसनप्रति सचेत हुन थालेको अनुभव सुनाउँछन् । तुलाधरका अनुसार कस्तालाई जाडोको लुगा भन्ने सोचाइमा नै निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । पहिले बाक्लो, भुवादार र मोटो ज्याकेट, टिसर्टहरू चल्थे । अहिले त्यो मानसिकतामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । जाडोका लुगाहरू पनि विभिन्न डिजाइनका बजारमा आइसकेका छन् ।
सुन्धारास्थित सिभिल मलका व्यापारी शर्मिला लामाले यसपालिको जाडोयाममा विशेष गरेर लङकोट, लङबुट, वानपिस ज्याकेट, लङटिसर्ट जस्ता युवतीका फेसनका सामग्री आएको जानकारी दिइन् । क्याप हाउसका राजेन्द्र श्रेष्ठको अनुभव पनि त्यस्तै छ । अहिलेका युवापुस्ता जाडोमा पनि फेसेनेबल देखिनु हर प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । कोरियन सामानको फेसन भएको हुनाले कोरियन टोपीहरू बढी बिक्री भएको अनुभव छ ।
बिहे तथा भोजभतेरका लागि क्याजुअलभन्दा पनि साडी लगाउने फेसन आएको छ । हिजोआज बजारमा हरेक प्रकार तथा डिजाइनका साडी उपलब्ध छन् । राम्रोसँग साडी लगाउन नआउनेहरूका लागि रेडिमेड ‘प्लिट्स’ भएका साडी पनि पाइन्छन् । जाडोमा साडीका साथमा ‘काडिर्गन’, ज्याकेट, कोट, हाइनेक आदि पनि लगाइन्छ । ‘सही तरिकाले लगाउन नजानेमा नराम्रो देखिन्छ पहिरनसँग साडीको जोडा पनि आकर्षक देखिन्छ,’ फेसन डिजाइनर निलिमा शर्माले साडीसित ज्याकेट लगाउँदा साडीको आँचललाई ज्याकेटको नेक बाहिर निकालेर मफलरजस्तै ओड्नु उचित हुने बताउँछिन् ।
अहिले ढाकाको पनि धेरै फेसनमा भएकाले यसलाई पनि जाडोमा प्रयोग गर्न सक्ने शर्माले जानकारी दिइन् । उनले यसले मौलिकपन आउनुको साथै न्यानो र फेसनेबल देखिने पनि बताइन् ।